लुटिएको सुन बेच्ने पक्राउ.. | WWW.HATTERI.COM
You are here : WWW.HATTERI.COM » Hong Kong, News » लुटिएको सुन बेच्ने पक्राउ..
लुटिएको सुन बेच्ने पक्राउ..
प्रकाशित मिति Saturday, January 7, 2017
गत नोभेम्बरमा २ करोड डलरको सुन लुटिएको समाचार संझनु भएको छ?
गत नोभेम्बर २२ तारीख बिहान ९ बजे फान्लिङको अन चेन स्ट्रिटमा हेरस टेक्नोलोजी सेन्टर बाहिर ३३ वर्षे ड्राइभर सुनको बोरा अनलोडिङ गरी ट्रलीमा राख्दै थिए ।
मौका कुरिरहेका ३ नकाबधारी आए, छुरा देखाएर ८१ वटा सुनको बार राखिएको त्यो बोरा लुटे । डेलिभरी गर्ने ड्राइभरलाई आँखामा मरिचको झोल स्प्रे गरी २० सेकेन्डभित्र बोरा लुटेर १०० मिटरको दूरीमा पार्किङ गरिरहेको २ वटा गाडीमा उनीहरु त्यहाँबाट टाप ठोके ।
पुलिसले उक्त घटनासँग सम्बन्धित एक ब्यक्तिलाई ७ बार सुनसहित पक्राउ गर्न सफल भएको छ ।
अस्तिको दिन बिहिबार ४ बजे ४० वर्षे अभियुक्तलाई सेङ सुईको एम टि आर स्टेशनबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनको चोर गोजीबाट २ बार सुन बरामद गरियो भने उनको फ्ल्याटबाट थप ५ बार सुन बरामद गरियो । मेटल डिटेक्टरको प्रयोग गरी उनले टिस्यु पेपर बक्स, फोनको खोल आदिमा लुकाइराखेका ती सुन पुलिसले फेला पारेको बताइन्छ । १ बार सुनमा १ किलो हुने र एक बारको मूल्य लगभग ३ लाख १५ हजार डलर पर्ने बताइन्छ ।
लुटमा प्रत्यक्ष संग्लन भए नभएको स्पष्ट नभए पनि अभियुक्तले नोभेम्बरमा लुटिएको ८१ बार (लगभग २ करोड २७ लाख डलर) सुन को बिक्री वितरणको जिम्मा सम्हालेको बताइन्छ । उनको चोरीको सुन १०% कमिशनमा चीनमा बेचेको बताइन्छ । संगठित अपराध गिरोहको सदस्य आशंका गरिको अभियुक्त र उनकी ६३ वर्षीया आमालाई पनि ताइ पो बाट सोधपुछको लागि पुलिसले नियन्त्रणमा लिएको बताइन्छ ।
नेपालमा हाकु कालेको फिल्म लुट २ फेब्ररीमा मात्रै आउने बताइ रहँदा यहाँ हङकङका हाकु (हाक सेक नै भन्छ चिनाहरुले कालोलाई, नेपाल भाषामा हाकु, कस्तो संयोग) हरुले उधुम मच्चाइरहेका छन् , हगि?
« हङकङका ज्येष्ठ नागरिकहरुको वृध्दभत्ता वृध्दि हुने
टाइम स्क्वेर मलको ६ तलाबाट हाम्फालेर … »